आउँदैछिन निकै सम्भावना सहित सन्ध्या ! – plus977.net
पछील्लो समय नेपाली सिने जगतमा थुप्रै नयाँ अनुहारहरु अाइरहेका छन। पर्दामा देखिने अनुहारहरुमात्र होइन , कथा बस्तु र प्रस्तुती शैलीमा पनि नबिनता देखिदैछ । अघिल्लो पुस्तालाई लगभग बिस्थापित गर्दै नयाँ नायक, नायीकाहरुले स्क्रीनमा तहल्ल्का पिट्दैछन । अनमोल के सि , प्रदिप खड्का , पल शाह , आकाश श्रेष्ठले आर्यन सिग्देल , जीवन लुइटेल , सौगात मल्ल आदीलाई रिप्प्लेस गर्दैछन भने सम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह , बर्षा राउत , अदिती बुढाथोकी, स्वस्तिमा खड्का लगायतले प्रियन्का, केकी , निशा , नम्रता , रिचालाई चुनौती दिदैछन ।
यसै बीच फिल्म ‘ कमलेको बिहे ‘ मार्फत अर्की सम्भावना बोकेको अभिनेत्रीको नेपाली रजतपटमा आगमन हुँदैछ – सन्ध्या के सि । त्यसो त सन्ध्याले भुवन के सि को निर्देशन रहेको फिल्म ” ड्रिम्स ” मार्फत डेब्बु गर्ने चर्चा थियो तर कारणबस उनी ड्रिम्समा देखीइनन् । त्यस पछी सुनिल रावलको फिल्म ” सायद – २ ” मा पनि सन्ध्या ‘इन’ भईन तर फिल्मको शुटिङ शुरु हुँदा सम्म सन्ध्या र निर्माण पक्षको असमझदारी बढ्यो र सो फिल्ममा पनि सन्ध्या भईनन् । अब भने फाईनल्ली ” कमलेको बिहे ” मार्फत सन्ध्या रजतपटमा देखिदैछिन । उनलाई निकै सम्भावना बोकेकी अभिनेत्रीका रुपमा लिने गरिएकोछ । सोसल मिडियामा समेत सन्ध्याका फलोवर्सहरु राम्रै छन । कतीले उनलाई नेपाली ऐश्वार्या राय समेत भन्ने गरेका छन । केही टि भि च्यानलहरुमा भिजेका रुपमा अनुभव बटुलेकी सन्ध्याले बिभिन्न फेसन शो तथा म्युजिक भिडियोहरुमा पनि काम गरिसकेकी छिन् ।
हालसालै उनको नयाँ फिल्म को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । यस ‘टाकान टुकुन’ बोलको गीतमा राजनराज सिवाकोटी र मण्डवी त्रिपाठीको स्वर रहेको छ भने भिडियोमा दीपकमान सिंहले नृत्य निर्देशन गरेका छन्। प्रसन्न पौडेलको निर्देशनमा तयार भएको ‘कमलेको बिहे’मा अनुप विक्रम शाहीले भिन्न भूमिकामा अभिनय गरेका छन् l सन्ध्याको अभिनय यात्रा सफल रहोस् शुभकामना !
SONG: KAMALEKO BIHE :
प्रस्तुत छ सन्ध्याका केही ताजा तस्बिर हरु :